Maqnaanshaha jirada ee kuxiran Covid-19: ka dhaafida shuruudaha bixinta gunnooyinka maalinlaha ah iyo kaabista loo shaqeeyaha
Tan iyo markii ay soo ifbaxday dhibaatada caafimaad, shuruudaha xaq u yeelashada macaashka bulshada ee maalinlaha ah iyo magdhowga loo shaqeeyaha ee dheeraadka ah ayaa la dabcay.
shaqeeyaan ugu yaraan 150 saacadood muddo ah 3 bilood oo taariikheed (ama 90 maalmood); ama ku tabaruca mushaharka ugu yaraan u dhigma 1015 jeer qadarka mushaharka ugu yar ee saacadle ah inta lagu jiro 6da bilood ee kalandarka ka horreeya joojinta.
Magdhowga waxaa la bixiyaa maalinta ugu horreysa ee fasaxa jirada.
Muddada sugitaanka 3-da maalmood waa la hakiyay.
Nidaamka kaabista dheeriga ah ee loo shaqeeyaha ayaa sidoo kale laga dhigay mid dabacsan. Shaqaaluhu wuxuu ka faa'iideysanayaa magdhowga dheeriga ah iyada oo aan la adeegsanin xaaladda waayeelka (1 sano). Muddada sugitaanka ee 7-ka maalmood ah sidoo kale waa la hakiyay. Waxaad bixinaysaa mushaharka dheeriga ah laga bilaabo maalinta ugu horreysa ee hawlgabka.
Ce dispositif exceptionnel devait s’appliquer jusqu’au 31 mars 2021 inclus. Un décret, publié le 12 mars 2021 au Rasmi Ah Journal, wuxuu kordhiyay tallaabooyinka xaqiraadda illaa Juun 1, 2021 oo loo dhan yahay.
Laakiin iska jir, tan ...
Fasaxa jirada: nasashada xaaladaha caymiska oo la kordhiyay ilaa Juun 1, 2021 July 8th, 2021Tranquillus
READ Tababbarka FNE: taageerada isbeddelay tan iyo Nofeembar 1, laakiin tababarku weli 100% ayaa lagu maalgeliyaa taageerada OPCO OCAPIAT-kaaga
horeHR Innovation 2021 - Maareynta shaqaalaha ACTIV: sharciga shaqada caqliga leh ee HR maalin-ka-fudud ah
socdaCaawimaadda shaqaalaynta dhalinyarada: kordhinta ama dheereynta